I-Ultrasound ekuhlanganiseni ukwakhiwa - Hielscher Ultrasound Technology
Izingxenye ezihlukahlukene, ezifana nezingulube, izigcwalisi, izithasiselo zamakhemikhali, ukuguqulwa kwezidakamizwa kanye nezindlela zokuguqula izidakamizwa ziya kuguqulwa nokupenda. I-Ultrasound yindlela ephumelelayo yokusabalalisa nokumisa, ukuguqula nokugaya izingxenye ezinjalo zokugqoka.
I-Ultrasound isetshenziselwa ukwakhiwa kwezingubo ze:
emulsification ama-polymers ezinkambeni ezinamandla
ukuhlakazeka nokukhishwa okuhle Ama-pig
ukunciphisa usayizi Ama-nanomaterials ekugqokeni okuphezulu
Izembatho ziwela emikhakheni emibili ebanzi: izinhlayiya nezembatho ezisekelwe amanzi. Uhlobo ngalunye lunenselele. Izikhombisi zifuna Ukunciphisa kwe-VOC futhi amanani aphezulu axazululwayo akhuthaza ukukhula emkhatsini wezobuchwepheshe bokugqoka ama-resin. Ukusetshenziswa kwe-ultrasonication kungathuthukisa ukusebenza okunjalo izinhlelo ze-eco-friendly.
Ukwakhiwa Kwesembozo Okuthuthukisiwe
I-Ultrasound ingasiza abakhiqizi bezakhiwo zokwakha, izimboni, izimoto kanye nezinkuni ukuthuthukisa izici zokumboza, ezifana namandla ombala, ukuqala, ukuqhuma kanye nokumelana kwe-UV noma ukuqhutshwa kwegesi. Ezinye zalezi zici zokugqoka zitholakala yi- ukufakwa kwezinto zokwenziwa kwe-nano-size, isib. i-metal oxides (i-TiO2, Silica, Ceria, ZnO, …).
I-Ultrasound yenza usizo olwengeziwe ku- Ukuhlukumeza (ubuningi obuthintekayo) futhi i-degassing (igesi elincibilikisiwe) lemikhiqizo enobungane kakhulu.
Njengoba ubuchwepheshe be-ultrasonic dispersing bungasetshenziswa I-Lab, ibhentshi-phezulu futhi izinga lokukhiqiza, okuvumela ukuba ama-throughput amanani angaphezu kwamathani ayi-10 / ihora asetshenziswa ku-R&D isigaba kanye nokukhiqiza kwezohwebo. Imiphumela yenkambiso ingafakwa kalula kalula (eqondile).
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic kakhulu amandla ephumelelayo. Amadivayisi aguqula i-approx. Amaphesenti angama-80 kuya kwangu-90 emandla okufakelwa kagesi abe ngumsebenzi womshini oketshezi. Lokhu kubangela izindleko zokucubungula eziphansi.
Ngezansi, ungafunda mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ku- i-emulsification yama-polymers ezinkambeni ezinamandla, the ukuhlakazeka nokugaya ama-pigment, futhi ukunciphisa usayizi wama-nanomaterials.
Izakhiwo zokugqoka zendabuko zisebenzisa isisekelo se-polymer chemistry. I shintshela ku-technology based based coating technology inomthelela ekukhetheni impahla eluhlaza, izakhiwo kanye nendlela yokwakha.
E-emulsion polymerization evamile, isb for zokugqoka amanzi, izinhlayiya zakhiwa kusukela phakathi kuya phezulu. Izici zengqondo zithonya i-particle homogeneity kanye ne-morphology.
Ukucubungula kwe-Ultrasonic kungasetshenziswa ngezindlela ezimbili ukukhiqiza ukuthuthwa kwe-polymer.
I-Top Down: Emulsifying/Ukuhlakazeka wezinhlayiya ezinkulu ze-polymer ukuze kutholakale izinhlayiya ezincane ngokunciphisa usayizi
Iphezulu elingaphansi: Ukusetshenziswa kwe-ultrasound ngaphambi noma ngesikhathi i-particle polymerization
I-Nanoparticulate Polymers e-Miniemulsions
I-polymerization yezinhlayiya ezincane ze-miniemulsions ivumela ukukhiqizwa kwe-polymer izinhlayiya ezihlakazekile ukulawula okuhle phezu kobukhulu bezinhlayiyana. Ukuqanjwa kwezinhlayiya ze-polymer ze-nanoparticrate kuma-miniemulsions (“ama-nanoreactors”), njengoba kuvezwe ngu K. Landfester indlela yokwakhiwa kwe-nanoparticles ye-polymeric. Le ndlela isebenzisa inamba ephezulu ye-nanocompartments (isigaba sokuhlakazeka) emulsion njenge-nanoreactors. Kulezi, izinhlayiyana zihlanganiswa ngendlela efana kakhulu ngabanye, amaconsi avalelwe. Ephepheni lakhe (I Generation on Nanoparticles in Miniemulsions) I-Landfester inikeza i-polymerization kuma-nanoreactors ekupheleleni okuphezulu ukuze kutholakale izinhlayiyana ezifanayo ezifana nobukhulu obuncane. I isithombe ngenhla ibonisa izinhlayiya ezitholakalayo nge-polyaddition miniemulsions.
Amaconsi amancane akhiqizwe ukusetshenziswa kwe ishear ephakeme (i-ultrasonication) futhi iqiniswe ngama-agent agxilile (ama-emulsifiers), ingaba lukhuni ngokwenza i-polymerization esilandelayo noma ngokushisa kwehle ekusetshenzisweni kwama-low-temperature-melting materials. Njengoba i-ultrasonication ingaveza amaconsi amancane kakhulu ubukhulu besayizi obufanayo ekwenzeni i-batch nokukhiqiza inqubo, ivumela ukulawula okuhle phezu kobukhulu bezinhlayiya zokugcina. Ukuze i-polymerization ye-nanoparticles, i-hydrophilic monomers ingafakwa emulsified ibe isigaba sezinto eziphilayo, nama-monomers hydrophobic emanzini.
Lapho ukunciphisa usayizi wezinhlayiya, indawo yonke yezinhlayiya zenyuka ngesikhathi esifanayo. Isithombe ngakwesobunxele sibonisa ukuhlangana phakathi kobukhulu bezinhlayiyana kanye nomhlaba uma kwenzeka izinhlayiya eziphephile (Chofoza ukuze ubone ukubuka okukhulu!). Ngakho-ke, inani le-survilant elidingakalayo ukuzinzisa i-emulsion lenyuka cishe ngokuqondile nendawo ephelele yenhlabathi. Uhlobo nenani lezinto ezibonakalayo elinomthelela usayizi wamaconsi. Amaconsi angama-30 kuye kwangama-200nm angatholwa kusetshenziswa ama-anionic noma ama-cationic surfactants.
Izingulube ze-Organic nezingenangqondo ziyingxenye ebalulekile yokugqoka amafomu. Ukuze ukwandise i ukusebenza kwe-pigment ukulawula okuhle phezu kobukhulu bezinhlayiya kuyadingeka. Uma ufaka i-pigment ye-pigment ukuze ibe namanzi, i-solventborne noma i-epoxy systems, izinhlayiya ze-pigment ngayinye zivame ukwakha ama-agglomerate amakhulu. Izindlela eziphakeme kakhulu ze-shear, ezifana nama mixers e-rotor-stator noma ama-agitator bead beills zijwayele ukusetshenziselwa ukuphula lezi zinhlayiya nokugaya izinhlayiya ze-pigment ngayinye. I-Ultrasonication ngempumelelo kakhulu okunye ngenxa yalesi sinyathelo ekukhiqizeni ukugqoka.
Isithombe ngakwesokudla (Chofoza ukuze ubone ukubuka okukhulu!) kubonisa umthelela we-sonication ngobukhulu be-pearl luster pigment. I-ultrasound igaya izinhlayiya ze-pigment ngayinye nge-speed speed-inter-particle collision. Inzuzo evelele
Ukuqhutshwa kwe-Ultrasonic ngaphezulu kwejubane elikhulu ukuxubana, imidiya yemidiya ukucutshungulwa okungaguquki kakhulu kwazo zonke izinhlayiya. Lokhu kunciphisa inkinga ye “umsila”. Njengoba kungabonakala esithombeni, amajika asakazwayo acishe ahanjiswe kwesokunxele. Ngokuvamile, i-ultrasonication ikhiqiza kakhulu ubukhulu bezinhlayiyana usayizi ukusatshalaliswa (curve milling curves). Lokhu kuthuthukisa ikhwalithi jikelele ye-dispersions ye-pigment, njengoba izinhlayiya ezinkulu zivame ukuphazamisa ukucubungula ikhono, isicwebezeli, ukumelana nokubukeka kwe-optical.
Kusukela i-particle Ukukhokha futhi ukugaya kusekelwe inter-izinhlayiyana ukushayisana ngomphumela we cavitation ultrasonic, amakhemikhali e-ultrasonic angabamba kahle ukugxila okuqinile (isib. ama-master batches) futhi namanje ukukhiqiza imiphumela emihle yokunciphisa usayizi. Ithebula elingezansi likhombisa izithombe ze-wet-milling ye-TiO2 (Chofoza ezithombeni ukuze ubone umbono omkhulu!).
TiO2 kusuka egazini lebhola
spray omisiwe TiO2
Isithombe kwesokudla (Chofoza ukuze ubuke!) Sibonisa isilinganiselo sokusatshalaliswa kwesilinganiso sezinhlayiya ze-deagglomeration of Degussa anatase titanium dioxide by ultrasonication. Ukwakheka okuncane kwejika ngemuva kwe-sonication kuyisici esivamile sokucutshungulwa kwe-ultrasonic.
Izinto zokwenza izinto ze-Nanosize ezembathweni eziphezulu zokusebenza
INanotechnology ubuchwepheshe obusafufusa obungena phakathi kwezimboni eziningi. Ama-Nanomatadium ne-nanocomposites asetshenziswa ekwakhekeni kokuhlanganisa, isb ukuqinisa ukumelana nokubambeka noma ukuqina kwe-UV. Inselelo enkulu yohlelo lokusebenza ekuphekeni ukugcinwa obala, ukucaca, nokucaca. Ngakho-ke, ama-nanoparticles abe mancane kakhulu ukugwema ukuphazanyiswa ukubonwa kokukhanya. Ngezicelo eziningi, lokhu kuphansi kakhulu kune-100nm.
Ukugaya okumanzi kwezinto eziphezulu ezisebenzayo kuya kububanzi be-nanometer kuba yisinyathelo esibalulekile ekwakhekeni kwengubo yama-nanoengineered. Noma yiziphi izinhlayiya eziphazamisa ukukhanya okubonakalayo, zibangela i-haze nokulahleka ekubonakaleni. Ngakho-ke, ukusatshalaliswa kosayizi omncane kakhulu kuyadingeka. I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu ye ukukhishwa okuhle of solid. cavitation ultrasonic eziketshezi zidala ukushayisana okukhulu phakathi kwezinhlayiyana. Ngokungafani nemishini yokugqoka eyizinyosi kanye namatshe okugcoba, ama-particles ngokwabo aqhudelana, ukunikeza imidiya yokugaya ingadingekile.
Izinkampani, like I-Panadur (eJalimane) sebenzisa amadivaysi e-ultrasonic e-Hielscher we-dispersing and deaggomerom of nanomaterials ngaphakathi kokubunjwa kwesikhunta. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi ngalokhu.
Ngokwe-sonication yeziphuzo ezinokutsha noma izixazululo ezindaweni eziyingozi ze-FM ne-ATEX-certified deivces, njenge- I-UIP1000-Exd ziyatholakala.
Cela ulwazi oluthe xaxa kulolu hlelo lokusebenza!
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nalolu hlelo lokusebenza. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.